"Fursada ay Al-Shabaab ka heshay" faragelinta Villa Soomaaliya ee Gedo
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Axmed Maxamed Islaam oo wata darees ciidan | Sawir hore
KISMAAYO, Jubaland – Faragelinta "guracan ee danaha siyaasadeed huwan" ee dowlada federaalka Soomaaliya ku sameysay gobolka Gedo ayaa Al-Shabaab u abuurtay fursad aysan horey u haysan, sidda ay sheegtay Jubaland.
Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka, Maxamuud Sayid Aadan, ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in talaabadaas "sharci-darada ah" ay saameysay horumarka balaaran ee gobolka ka socday.
Hay'addihii gargaarka ee caawinayey dadka ay dhibaatu kasoo gaartey abaaraha iyo dagaalada Al-Shabaab ayuu sheegay in a bilaabeen in ay isaga baxaan gobolka, iyagoo u baqaya badqabkooda iyo ammaankooda.
"Sanadahaan dambe waxaan moodaa markii khilaafka siyaasadeed abuurmay kahor dhulka miyiga bey ku jireen, koox-koox yar oo Shabaab ah ayaa ku jirtay dhulkaas, laakiin hadda waxaa dhacday degaano waaweyn sidda Ceel-Cadde iyo degaano kale ay hadda Shabaab saldhig ka dhigteen fursadna ay u helaan in ay ciidamo ku dhex-tababaraan gobolka, dib-isugu habeeyaan, dakhli ku uruursadaan, fursad aysan shalay haysan in ay maanta heleen bey u badan tahay," ayuu u sheegay warbaahinta dowlada Jubaland.
Markii la waydiiyey cidda qaadaneysa mas'uuliyada cawaaqibkaas ayuu ku jawaabay "fursadaas waxaa bixisay khilaafka, dowladda federaalka iyo faragelinta sharci darada ku saabsan degaanada, guud Soomaalida oo dhan way ku haysaa, laakiin qaasatan ay gobolkan Gedo ka waday".
Askarta oo laga soo daabulay magaalada Muqdisho "oo amnigeeda ay sugi wayday" dowlada Farmaajo ayuu tibaaxay in ay ku lug-yeesheen "burburinta maamulada degmooyinka iyo khalkhal gelinta nabad-gelyadda".
Gedo oo kamid ah gobolada ugu balaaran Soomaaliya ayaa kahor faragelinta dowladda federaalka kamid ahaa meelaha ugu nabad-gelyada wanaagsan dalka isla markaana ay ka howlgeli jireen hay'addaha samafalka.
Afar maalmood kadib, degmada Luuq ayaa lagu guuleystay in laga saaro "cadowga" Umadda Soomaaliyeed, 7-dii bishii Maaj ee sanadkaas.
Garbahaarey, oo qabashadeeda ay taariikh weyn lahayd maadaama Shabaabku xiligaas maamulayeen badi gobolada Soomaaliya ayaa "shacabka laga dulqaadey culeyska argagixisadda" bishii April 11-keeda.
DF oo "abaabushay" jabhad carqalad gelisa doorashooyinka 2020-21
Soomaliya 16.02.2020. 21:50
Tani ayaa imaaneysa xili la tilmaamay in qalab ay bixisay Qadar loo adeegsanayo qalalaasaha Gedo.
Qarax ka dhacay Jubada Hoose oo lagu dilay dad aroos u socday
Soomaliya 03.02.2020. 13:25
Sirdoonka Jubaland oo soo bandhigay nin Kismaayo ku dilay askari
Soomaliya 10.12.2019. 07:38
Sarkaal sheegay in Soomaaliya iyo Itoobiya ay yihiin hal dal
Soomaliya 11.02.2020. 14:09